घरमा अचानक कमिला देखिनु कस्तो संकेत ? तपाईको घरमा पनि छन् की ? – Sandesh Press
घरमा अचानक कमिला देखिनु कस्तो संकेत ? तपाईको घरमा पनि छन् की ?
January 7, 2022 78
काठमाडौँ । घरमा कमिला आउने जाने गरेको देख्नुभएको छ भने यसले केही संकेत गर्न खोजेको हुनसक्छ । ज्योतिषका अनुसार घरमा कमिला आउनु भनेको जीवनमा हुने परिवर्तनको संकेत हो ।
यदि घरमा कालो कमिलाको आवत जावत हुने गरेको छ भने यसले भाग्योदयको संकेत गर्छ । कालो कमिला आउदा आर्थिक समृद्धि हुनुको साथै सुख मिल्ने बताईन्छ । त्यस्तै घरमा रातो कमिला आवत जावत गर्छ भने त्यसले घरमा केही अशुभ हुने र परिवारमा तनाव बढ्ने संकेत गर्दछ ।
धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कि कालो कमिलालाई खुवाउनु शुभ हो। यदि कमिलाहरू चामलले भरिएको भाँडाबाट बाहिर आउँदैछन भने ती राम्रा संकेतहरू हुन्। यो विश्वास छ कि तपाइँको पैसा केहि दिनहरुमा बढ्नेछ। व्यक्तिको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन गइरहेको छ। कालो कमिलाको आगमन भौतिक सुखसुविधाको चीजको लागि मानिन्छ ।
यदि रातो कमिलाहरू घरमा देखिन्छन्
सावधान हुनुहोस् यदि तपाइँ आफ्नो घर मा कतै पनि रातो कमिला देख्नुहुन्छ भने यसको मतलब केहि ठूलो अपमानजनक अशुभ हुन सक्छ। यदि हामीले धर्ममा विश्वास राख्छौ भने जान्नुहोस् कि रातो कमिलाहरूले भविष्यमा हुने समस्या, झगडा, पैसा खर्च हुने सङ्केत दिन्छन्। यदि रातो कमिला तपाईंको घरमा आउँदैछ भने, यी सबै दुष्ट चीजहरू तपाईंलाई हुन सक्छ ।
तर यदि रातो कमिलाले मुखमा अण्डाको साथ घर छोड्छ भने, यो राम्रो संकेतको रूपमा देखिन्छ। कमिलाहरूले खानेकुरा खानु पर्छ। यदि कमिलाहरू तपाईंको घरमा भोकाएका छन् भने, यसलाई अशुभ सङ्केत मानिन्छ ।
कमिलालाई के खुवाउँदा शुभ
कमिलालाई रोटी अथवा चिनी खुवाउँनु निकै शुभ मानिन्छ । कमिलाई चामलको रोटीमा शख्खर मिसाएर खान दिदा भाग्योदय हुन्छ र परिवारमा शान्ति मिल्छ ।
यदी हरेक काममा उल्झन आईरहेको छ भने कमिलालाई चिनीमा नरिवलको धुलो मिलाएर खुवाउनुपर्छ । यस्तै बदामको धुलोमा चिनी मिसाएर दिदा तनाव हट्ने र ब्यापार ब्यवसायमा प्रगती हुने बताईन्छ ।
यदि राशीमा शनि दोष छ भने कमिलालाई चनाको रोटीमा चिनी मिसाएर दिदा शुभ हुन्छ । यस्तै राहुको दशा चलिरहेको छ भने कमिलालाई चिनी दिदा शुभ हुन्छ ।
यदि तपाईको सुर्य कमजोर छ भने आईतबारको दिन कमिलालाई खिर बनाएर दिदा शुभ हुन्छ । यदि कुण्डलीमा पितृ दोष छ भने कमिलालाई अमावस्यको समयमा आफुले खाने खानेकुराको केही अंश कमिलालाई खुवाउनुपर्छ ।
गृह दोष दुर गर्नको लागि कमिलाई गुलियो रोटी खुवाउद शुभ हुन्छ । साथै लक्ष्मी पनि खुसी हुन्छिन् ।
यसैगरी सपनामा कमिला देख्दा धन लाभ हुने बताईन्छ । तर अधिक मात्रामा कमिला देखे जीवनमा चिन्ता बढ्ने संकेत गरेको मानिन्छ ।
घरमा आएको कमिलालाई मार्नु दुर्भाग्य हुने समेत ज्योतिषमा बताईएको छ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पुस २३ गते शुक्रबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextटिकटकमा मुुठ्ठी ठोक्काएर गरिबलाई पैसा बाड्ने गिविना, के छ उनको यति ठूलो आयस्राेत ?
बैंकका कर्मचारी धमाधम पक्राउ, कारण थाहा पाउँदा तपाईपनी डराउनुहुन्छ
घरमा राख्नुहोस् चाँदीले बनेको हात्ती, बन्नुहुनेछ छिट्टै धनवान
कपाल रोप्न ऋण पाइने, यस्ता चाहिन्छन डकुमेन्ट !
अब खाना पकाउने ग्यास ११२० रुपैयाँमै पाइने! (3517)